Deeqaha mashruuca Xfce | Laga soo bilaabo Linux
Cidna uma qarsoona cidna in mashruucu yahay Xfce Waxay had iyo jeer la il darnaatay gabaabsi xagga horumarinta iyo kheyraadka guud ahaan, waa sababtaas darteed in meertada horumarku ay aad u gaabis tahay marka loo eego tan kale ee DEs. Sababahan awgood muddo dheer ayey ahayd goleyaasha Xfce waxay codsadeen hab loo diro tabarucaadka mashruuca; mid ka mid ah fariimaha, Nick sharfe (madaxa mashruuca) wuxuu xusay xaqiiqda ah inay ka shaqeynayeen abuuritaanka aasaas si ay u awoodaan inay helaan oo u qaybiyaan lacagaha, hase yeeshee, in kastoo bogga iyo kuwa kale, tani waligeed ma dhammeynin matoorkeeda (wixii aan ka ogayn illaa iyo hadda waxaa jiray caqabado badan oo xagga maamulka ah si ay u dhacdo)
Hagaag, waqti dheer kadib hada waxaa la go'aansaday in la doorto ikhtiyaar kale, soo saare firfircoon labadaba Xfce (isagu hadda wuxuu mas'uul ka yahay isbeddelada ku jira muujinta hadalka) isagoo xubin ka ah Xubuntu iyo iskaashi Mashruuca Shimmer, Simon steinbeiss, wadajir ahaan Eric Kohel, sidoo kale horumariyaha iyo labada madax ee hada xfce-power-manager, ayaa kaga dhawaaqay goobta liiska boostada de Xfce koonto ka sameysay Isha Bounty loogu talagalay Xfce.
Hadda waa maxay Isha Bounty?
Lamaanaheena lolbimbo ayuu nooga waramay toddobaadkii hore, laakiin asal ahaan, sida tarjumaaddan bilaashka ah ee Su'aalaha Isha Bounty:
Isha Bounty waa barnaamijka maalgelinta loogu talagalay softiweeriyada furan. Isticmaalayaashu waxay sare u qaadi karaan mashaariicda isha furan ee ay jecel yihiin iyagoo abuuraya / uruurinaya abaalmarinno una ballan qaadaya lacag ururin
Su'aalaha badan ee la xiriira yaa abaalmarin kara, goorma ayaa loo calaamadeyn karaa sida la xalliyay, iyo wixii la mid ah, waxaan soo jeedinayaa akhrinta Su'aalaha la soo sheegay ee kor ku xusan.
Hadda, sida Simon ku sharraxay farriintiisa, waxaa jira laba siyaabood oo wax looga geysto:
Ku abaal mari abaalmarin bug gaar ah. Qeybaha ugu badan ee ka kooban warbixinadooda qaladka horay ayaa loogu soo daray barxada, waana la baari karaa Halkan.
Taageer kooxda Xfce guud ahaan
Goobta horeba wuu u shaqeeyaa oo waxay leedahay astaamo aad u xiiso badan, sida in dhowr qof ay abaalmarin u siin karaan isla cayayaanka tusaale ahaan, ama aysan iyagu qaadanayn qayb ka mid ah lacagta iyaga oo u xilsaaraya; laakiin xitaa way ka sii badan tahay (fikradayda ugu yaraan), waa tan qof kastaa wuu ku darsan karaa abaalmarin isagoon ka mid noqon ama aan xiriir la yeelan mashruuca. Sidii aan horayba u soo sheegay, waxaas oo dhan ayaa lagala tashan karaa bogga.
Ujeeddada waxaas oo dhan ma ahan in laga macaasho Xfce laakiin dardargeliyaan horumarkooda, xitaa kaba sii daran markay ku jiraan liiska waraaqaha xfce-dev horaa loo abuuray liiska cayayaanka halista ah in la xoreeyo Xfce 4.12.
Haddaba yaa ku deeqi kara inay sidaas sameeyaan, haddii aysan ujeeddo gaar ah lahayn, kooxda oo dhan; laakiin dabcan, waxaad xiiseyn kartaa cayayaanka gaarka ah, waqtigan tusaale ahaan waxaa jira tabarucaad lagu daro muuqaal soo bandhigaan sida kuwa kale, ama kuwa bixiya xayeysiis-xd. Faafinta warka sidoo kale waa lama huraan in la caawiyo, shaqsi ahaan waxaan rajeynayaa in tani ugu dambeyn ay siiso dhiirigelin taas Xfce u baahan tahay waqti dheer.
Ugu dambeyntiina, waxaan jeclaan lahaa inaan xuso in kasta oo tabarucaad loo samayn karo muuqaal gaar ah, tani ma hubinayso inay horumariyayaashu go'aansadeen inay ka shaqeeyaan. Sida ku xusan xeerarka Isha Bounty, abaalmarinta waxaa la sheegan karaa oo keliya iyada oo loo marayo nidaam kaas oo horumariyaha uu siinayo koodhka oo lagu daro mashruuca dhammaan deeq bixiyeyaashuna ay u codeeyaan inay aqbalaan. Si kastaba ha noqotee, way dhici kartaa in abaalmarinta cayayaanka ama astaamaha dheeraadka ah ay jiraan laakiin cidina ma xiiseyneyso inay ka shaqeyso, inkasta oo aysan u badnayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Deeqaha mashruuca Xfce
Taasi waa fiicantahay. Waan jeclaa Xfce waxbadan kahor, laakiin runtu waxay tahay inay leedahay dhowr cayayaanka oo ay ka maqantahay astaamo qaar, taas oo iga dhigaysa inaan doorto KDE ama Cinnamon xitaa netbook.
XBD nolosha qaab ahaan dijo
Waa hagaag, waxay ila egtahay mid aad u dhib badan aniga, maxaa yeelay iyagu ma dhigaan badhanka paypal oo waxay helayaan tabarucaadka, waan siin lahaa iyaga iyo farxad weyn. e waxaa loogu deeqay qaar ka mid ah barnaamijyada bilaashka ah ee mashaariicdiisa. Fikraddu aniga waxay ila muuqataa mid wanaagsan, laakiin waxaan u arkaa inay tahay mid isku dhafan. aragtidayda deeq bixiye ahaan. Farxad
Ka jawaab nolosha XBD qaab ahaan
Ma arko sida ay u murugsan tahay, tabarucaadka waxaa lagu samayn karaa Google Walet, BitCoin iyo Paypal oo lagu daro kaliya marinka bogga mashruuca halkan https://www.bountysource.com/teams/xfce oo dooro qiimaha aad ugu tabarucayso bidixda.
Waxaan u adeegsaday XFCE illaa noocii ugu dambeeyay ee ay dhigeen Whisker waxayna ku kordhiyeen isticmaalka hore 50MB. Intaas, waxaan dib ugu noqday LXDE (taas oo aakhirka u gudbin doonta QT) waxaanan haystaa adeegsi qosol badan markaan bilaabayo iyo OpenBox oo ku duulaya mashiinkeygii hore.
Ceeb sababtoo ah runtii waan jeclaaday XFCE. Waxaan rajeyneynaa inay helaan maalgelin oo ay horumariyaan; halka aan durba u arkay inay igu adag tahay inaan ka soo baxo diyaaradan oo la yiraahdo LXDE.
Liiska muusikada si fudud ayaa looga saari karaa oo loo dhigi karaa asalka 'Xfce menu'. Uma maleynayo in xitaa kuwa horumariya Xfce ay sameeyeen, qof ayaa sameeyay qaarna distros ayaa dib loogu celiyay noocyadooda Xfce. Waa inaad aqriso waxbadan.
Sida ay kuu sheegaan, Whisker Menu maahan qayb rasmi ah oo ka tirsan Xfce, waa mashruuc madaxbannaan oo Xubuntu ku daray (oo ay weheliso qaybinta kale), waan ka qoomameynayaa xoogaa yaraynta hadalka laakiin ha isku qaldin Xfce iyo Xubuntu. Sidoo kale way fududahay sida looga saaro maareeyaha baakadka ee qaybintaada; apt-get hadday tahay Debian / Ubuntu, pacman hadday tahay Arch / Manjaro, Urpm hadday tahay Mageia, ama yum hadday tahay Fedora.
Hagaag, waa hagaag, aan aragno. Khaladkeyga. Maaha inay si toos ah u adeegsatay XFCE laakiin Xubuntu. Xubuntu-na waxay gelisay Whisker-ka. Oo yaa garanaya waxa kale ee aan ahayn isticmaalka ayaa kor u kacay in ka badan 50MB. Maaddaama mashiinkeygu aad u da 'weyn yahay waxaan go'aansaday inaan dib u laabto oo aan sameeyo Lubuntu. Ugu dambeyntiina waxay ahayd tallaabo horay loo qaaday maxaa yeelay OpenBox runtii waa wax lala yaabo.
Waxaan rajeynayaa inaan sifiican isku sharaxay hada 🙂
Runtii weligay maan fahmin sababta loo dhigayo Whisker haddii XFCE (iyo markan waxaan ula jeedaa XFCE) durba waxay leedahay wax lamid ah sanduuqa. Waxaan u maleynayaa taas oo leh Alt + F3 waa la hawlgeliyey.
PS: Haa, waan ka saari lahaa Whisker iyo waxaas oo dhan, laakiin waligey kuma guuleysan laheyn isticmaalka hooseeya ee RAM-ka Lubuntu.
Whisker on Debian Jessie kuma kordhinayo isticmaalka 50 MB (ama kala bar), waa inuu noqdaa xubin kale oo Xubuntu ah oo intaas sameeya ...
Taasi waa sidaan idhi
Muxuu qof ugu tagi karaa alt + f3 si uu wax u raadsado, haddii uu si fudud u dhigi karo liiska dalabkooda oo uu raadin karo wax kasta oo uu doonayo, iyo sidoo kale inuu ku haysto waxyaabaha ay ugu jecel yihiin hal meel iyo dhowr toobiye oo kale?
Taabo Alt + F3 waadna arki doontaa waxaad hesho. Waxaa jira kuwa PC ku shaqeeya kumbuyuutarka si ka dhaqso badan jiirka. Waa siyaabo fudud oo wax loo sameeyo. Waxaa laga yaabaa in Whisker leeyahay toobiye, sax? Hagaag, liiska aasaasiga ah ee XFCE (oo aan ahayn Whisker) ayaa iskood iskaga soo baxa adoo riixaya isku darkaas. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad tijaabiso waadna arki doontaa waxaan ula jeedo. Waxay la mid tahay Whisker. Waxaa intaa dheer, layaabi maayo haddii horumariyaha uu ku dhiirrigeliyo inuu soo saaro Whisker.
Hagaag, sii wadi maayo dunkaan mar dambe. Sida muuqata, si kasta oo aan u qoro, isma fahmi karo. Salaan sxb friends
Uma maleynayo inay horumar badan u hartay gtk2, ma dhaawaceyso. Waxaan u maleynayaa in ugu dhaqsaha badan ay u haajiraan gtk3 ama aad taqaan qt.
Nooca 4.10 waxaa jiray dhaleeceyno uusan isagu ku raacsaneyn sii joogida GTK 2. Laakiin nooca 4.12, ku dhawaad ​​sanad iyo badh ayaa ka dambeeya jadwalka sii deynta iyo haynta GTK 2… Uma muuqato wax fiican Xfce. Laakiin haye, haddii Debian u dhigo sida desktop-ka caadiga ah, iyagu way ku kalsoon yihiin, aniguna waxaan ahay kan aan isticmaalo.
Goormaadse qorshaynaysaa inaad ka tagto gtk2?
Noolow XFCE !!!!!!!
OpenSUSE Warshad: sii deyn cusub oo disto ah